Yusuf Ismaaciil Baribari oo weerarkii Hotel Maka al-mukaramah lagu dilay
Home Somali News Somali:Yusuf Ismaaciil Baribari oo weerarkii Hotel Maka al-mukaramah lagu dilay
Weerarkii maanta oo Jimce ah lagu qaadey Hotel Maka al-Mukaramah magaalada Muqdisho ayaa la cadeeyey dadka ku geeriyoodey in uu ka mid yahay Ambassador Yusuf Maxamed Ismaaciil oo loo yaqaaney Baribari.
Yusuf Baribari ayaa ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiyey Geneva xarunta xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobey, waxaana uu maalmihii u danbeeyey ku sugnaa magaalada Muqdisho. Waxaa Baribari soo gaarey dhaawac culus, waxaana uu ku geeriyoodey Isbitaalka sida uu sheegey Agaasimaha Wasaaradda ganacsiga Dowladda Federaalka, waxaana uu kamid ahaa siyaasiyiin lagu casumey shirka New Deal ee la doonaayey in galabta uu ka dhaco Hotelka.
Yusuf Baribari ayaa ahaa nin si weyn looga yaqaaney Soomaaliya, waxa uu kamid ah ahaan jirey siyaasiyiintii SSDF isaga oo ka soo qaybqaatey inta badan shirarkii dib u heshiisiinta Soomaaliya.
Weerarka kooxda al-Shabaab ka tirsan ay ku qaadeen Hotel Maka al-mukaramah bartamaha Muqdisho ayaa ah mid weli socda, lama yaqaano tirada saxda ah dadka ku geeriyoodey.